Iwe Uri Anokanganisa Kuita Zvinhu Zvakakwana, Realist, Kana Kuongorora? (Quiz) - Kungonakidzwa
Unogona kufunga kuti unoziva mhinduro yemubvunzo uyu, asi hazvisi nyore sezvazvinoratidzika. Isu tese tine zvinhu zveumwe neumwe mukati medu, uye zvinokwira kumusoro nguva nenguva kana kana zvichidikanwa. Iko kune, zvakadaro, panogona kunge paine rimwe simba rinotungamira iro rinochinja maitiro aunoona nyika kazhinji yenguva.
Mukwanisi ane ziso rekushingairira ruzivo uye anowanzo cherekedza zvinhu izvo vamwe vanosuwa. Ivo vanovenga zvachose kuita zvikanganiso uye vangangoedza uye kudzivirira mukana wekutadza kana vachikwanisa. Ivo havana kunyanya kunaka kutarisa zvinhu kubva pane yakafara maonero, kusarudza, pachinzvimbo, kutarisa pane yakatarwa nyaya kana chiitiko uri wega.
Munhu wechokwadi anowanzo dzivisa kunyanyisa kwezvakanaka nezvakaipa, achida kuona nyika sezvairi. Ivo vane pfungwa dzesainzi, vachivimba nedanho repfungwa kuona danho rakanakira chero mamiriro ezvinhu. Kunyangwe ivo vaine rakakomberedzwa rakashatirwa remweya divi, ivo vanowanzo kusarega richitungamira kana kuvadzora zvakanyanya.
Nyanzvi inobvuma kuti nyika yakavapoterera inogona kunge isingaite sekutanga painotaridza. Kwavari, mitsara pakati pezvinhu zvinoita sezvakasiyana zvinhu inowanzo sanzwisisika uye vanowanzo tenda mune masimba akadai sekutenda, ramangwana, kusangana, uye serendipity. Ivo vanogona kunge vari vekugadzira uye vanofungidzira mweya vasingawanzo kutadza kuona kushamisika muhupenyu.
Kana iwe uchinetseka kuti ndechipi pane izvi chinowanzo kuve chiri kutonga mupfungwa dzako, edza iyi bvunzo iyo inokumbira iwe yakateedzana yemibvunzo yakagadzirirwa kuti uzive.
Chii chaive mhedzisiro yako? Zvinoita kunge zvinoenderana nekufunga kwako here? Siya mhinduro pazasi uye utiudze.
Iwe unogona zvakare kunakidzwa neiyi mibvunzo:
Ndeupi Enneagram Hunhu Hwako Ndiwe?
Iyi Abstract Image Bvunzo Inosarudza Hwako Hukuru Hunhu Hunhu
Chii Chako Chisingazivikanwe Chinoonekwa Neicho?
zvekutaura kushamwari ichipfuura nekurambana
zvinhu zvekutamba kana iwe uchinetseka
sei kusanyanya kunetseka uye kunzwa
chii chinotevera ronda rousey
varume vanodhonza here pavanodanana